Kuwa ugu fiican ee ka soo baxa-off-piste oo leh muraayadahaaga barafka! - ULLER
MAALMAHA JIMCAHA MAGAALADA: LACAG LA'AAN ilaa 75%
ADUUNKA UGU DAMBEEYA
Hore / Xiga →
Off-piste faraciisa oo leh Muraayadaha barafkaaga Ugufiican freeride!
Freeride waxaa loo yaqaanaa qaabka snowboard taas oo aad ka dhigayso farac gebi ahaanba ka baxsan-piste, baraf gebi ahaanba bikro ah, oo ka fogaanaya dhammaan dhagaxyada iyo caqabadaha nagu soo food leh. Waqtigaan la joogo, waxaa jira tartamo baraf baraf ah oo ka dhaca dariiqyada la jeexjeexay ee buuxiya xaaladaha ugu fiican, in kastoo runta ay tahay in kuwa jecel freeride-ka dhabta ah shaki la'aan ay doorbidaan fadhi baraf wanaagsan oo baraf wata oo leh boodbood adag.
Caadi ahaan, dadka qaarkiis waxay freeride kula midoobaan laamaha kale sida freecarve ama xitaa barafka aadka u daran. Laakiin runtu waxay tahay in marar badan ay kaliya tahay arrin faahfaahin yar. Tusaale ahaan, sabuurada loo adeegsado kiiskan waa inay ahaadaan kuwo aad u kala jaad ah maxaa yeelay marka lagu jiro dib u dhaca freeride, guddiga wuxuu u baahan yahay inuu ku bixiyo dhaqan aad u wanaagsan barafka budada ah, barafka adag iyo marka lagu tababaranayo inuu ka boodo baararka dhagaxa weyn ee aan ku qabanno our muraayadaha barafka.
Sababtoo ah waa kuwo aad u kala jaad ah oo isu rogi kara, looxyada qaabdhismeedka freeride waxay qaataa ficil ahaan kala badh inta suuqa wadaagta oo dhan, maadaama ay damaanad qaadayaan waxqabad aad u wanaagsan dhammaan xaaladaha, waa guddiyada dhulka oo dhan: ha ahaadeen meelaha dhaadheer, baraf baraf ah ama tuubada badhkeed, iyo sidoo kale meelaha dhaadheer ee barafka lagu caweeyo.
Waxaan ka hadleynaa looxyada jihada ah, taasi waa, waxaa loogu talagalay in lagu dhajiyo hal jiho oo kaliya: hore, horay. Looxa barafku wuxuu leeyahay qaab jaho ah marka caarada iyo dabadu aysan is lahayn. Dabada ayaa ka cidhiidhsan, ka gaaban, oo qalooca ka hooseysa sabuuradda hore. Sababtaas awgeed, looxyada 'freeride' xirxirayaasha ayaa xoogaa gadaal loo dhigaa si culeyska fardooleyda loogu raro dhinaca dambe ee guddiga oo sidaasna lagu magdhabo asymmetrykaan. Xitaa iyada oo wax walba, waxaad ku tababbaran kartaa farsamooyinka dhaqdhaqaaqa miisaska noocan ah, in kasta oo aan si gaar ah loogu qaabayn.
Looxyada 'Freeride' waxaa lagu gartaa inay ka adag yihiin, ka dheer yihiin kana khafiifsan yihiin looxyada xorriyadda leh. Iyadoo ay taasi jirto, waxay leeyihiin jilicsanaan aad u jilicsan oo aad u dhaqdhaqaaq badan, taas oo caawimaad weyn u ah bilowga. Waana in freerides-ka ay yihiin kuwa barafka ugu kala jaban oo aad u kala badan oo aad ka heli karto, maaddaama ay ka shaqeeyaan dhammaanba xaaladaha aad ka heli karto heer wanaagsan.
By habka, iyada oo looxyada "buurta oo dhan" waxaad xiran kartaa kabaha "jilicsan" ama "tallaabo-tallaabo" iyo xiritaanka. Kala soocida udhaxeysa xarigyadan ayaa ah mid aad u weyn (inta udhaxeysa 50 iyo 55 sintimitir) xagalkooduna wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay fuulida fuushan sabuuradda, guud ahaan, inta udhaxeysa 0 iyo 15 darajo ee dhanka dambe iyo inta udhaxeysa 15 iyo 25 dhanka hore. Si kastaba ha noqotee, fuulayaasha kale waxay ku sharad galaan booska "duck". Kuwa xorta ah ee xorta ah ayaa dhigaya isku xidhka waxoogaa gadaal ah si ay sifiican ugu sabbayn karaan ... Markasta oo ay xidhaan labadooda ugu fiican muraayadaha barafka.
Horumarka ee snowboard Waxaa laga soo dheegtay isboortiga kale ee isdaba jooga ah sida isteerinka ama fuulitaanka. Sanadkii 1965, injineer Sherman Poppen ayaa gabadhiisii ​​u dhisay "sabuurad" barafkeedii ugu horreeyay magaalada Muskegon, Michigan. Waxay ahayd loox alwaax ah oo aan cagaha qabsan iyo xadhig xagga hore ah oo ka caawiyay in la ilaaliyo dheelitirka. Shirkadda Brunswik waxay isku dayday inay horumariso oo ay iibiso fikraddan cusub ee sida weyn u guuleysatay sannadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii.
Sidoo kale waqtigan, badmaaxa jecel-doonka ah ee Dimitrije Milovich wuxuu naqshadeeyay loox le'eg barafka, laakiin aad uga ballaaran, oo "kufilan kara" barafka budada ah, ee loo yaqaan Winterstick.
Maanta waxaa jira malaayiin dad ah oo ku tababaranaya isboortigaan halkaasoo uu u noqday qaab nololeed dad badan iyo isboorti meesha moodada dharka barafka ay aad u joogto.
Goorma ayuu barafku yimid Spain?
In kasta oo xaqiiqda ah in Sherman Poppen ay aliftay samaynta looxaanta barafka ee dalka Maraykanka sanadihii 60-maadkii oo ay caan noqotay 80-maadkii, haddana Spain ma iman ilaa horraantii 90-meeyadii.
Maxay yihiin qaababka looxa barafka?
Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Freestyle, Freeride, Parallel Slalom, Boardercross iyo buuro ama baraf baraf ku socda. Freestyle gudaheeda waxaan kaheleynaa waxyaabaha soo socda:
Slopestyle: boodbooyin, xadiidyo iyo khaanado. Waxay noqon doontaa anshax Olombikada laga bilaabo Olambikada Jiilaalka ee 2014.
Xagee ayaan ku barafayn karaa Spain?
Ka faa'iideyso oo la baxso adiga muraayadaha barafka saldhigyada ugu fiican: Baqueira-Beret (qoraalkeygii hore waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka), Astún, Candanchú, Formigal, Cerler iyo Sierra Nevada.
Sidoo kale ku raaxee barafka barafka ay dejiyeen. Aad bay si aad ah uga shaqeeyeen qaabeeyayaal waaweyn. Dhadhankeenna, waxa ugu fiican kan Formigal. Jawiga u dhexeeya wadayaasha sidoo kale waa mid aan laga adkaan karin.
Miyaad ku faraxday macluumaadkan ku saabsan barafka lagu duubo?
Waa kuwan fiidiyowyo cajiib ah oo kaa tagi doona dhareerka maalinta oo dhan ... Ha moogaan!
Xusuusnow inaad markasta sidato dhamaan qalabka isboortiga oo ay kujiraan kuwaaga muraayadaha barafka,iyo sidoo kale inaan yeesho waxbadan oo ah diyaar garaw jireed iyo maskaxeed, laakiin waxaas oo dhan ka sareysa ... runtii waxaan rabaa inaan gudbiyo!
Daabacaadyada La Xiriira
Muraayadaha Barafka Lagu Xulo kuwa ugu fiican 3 talaabo kaliya!
Haddii aad galeyso adduunyada barafka, ama aad horeyba u rabtay inaad ku beddesho muraayadahaagii barafka hore kuwo ka wanaagsan, ka wax qabad iyo adkaysi badan, waxaan kuu haynaa qaaciddada kuugu habboon ee aad ku dooran karto.
Kuwaani waa 5ta jeer ee ay tahay inaad xirto muraayadaha indhaha
Xirashada maaskaro barafka wanaagsan waa lagama maarmaan marka la sameynayo isboorti xad dhaaf ah barafka.Ma waxaad dareemeysaa inaad diyaar u tahay inaad ka gudubto halista dabeeciga markaad barafka wado Baro 5ta
Ski Goggles Soo ogow goorta iyo sababta ay tahay inaad u isticmaasho!
Xirashada muraayadaha indhaha waa lagama maarmaan marka aan ku tababbarayno ciyaartan nooc kasta oo ay tahay. Sii wad akhriska si aad u ogaato habka ugu fiican
Muraayadaha barafka ama muraayadda barafka Halkee ayaan ka bilaabaa?
Haddii aad weli ka fekereyso inaad bilowdo isboortiga jiilaalka, kama daahin inaad dib u eegto waxa aad doorbideyso markaad dooraneyso halkaad ka bilaabi laheyd, dooro qaabka kuugu habboon ee aad fahmi karto
Muraayadaha barafka 2020 Cusbooneysii maaskaarkaaga xilliga barafka!
Miyaad horeyba u ogayd sababaha ay tahay inaad had iyo jeer xirto muraayaddaada ama maaskaro marka aad aadeyso meelaha barafka? Shaki la'aan, waxaa la joogaa waqtigii cusbooneysiinta muraayadaha indhaha barafka ee 2020 loona diyaar garoobo xilligan es
Bixinta Xirfadlayaasha Barafka
U bandhig khubarada barafka
U bandhig barayaasha barafka
U bandhig fardooleyda
U soo bandhig khidmadayaasha
Naadiga Ski naadi
© 2020 Uller. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh